Pakistan vs Zimbabwe 2nd Test Live Streaming: When and where to watch match live? – India Press News
Pakistan vs Zimbabwe 2nd Test Live Cricket Score Streaming Online: With an aim to continue their winning run, Pakistan are all set to face hosts Zimbabwe in the second Test starting today (Friday).
Babar Azam’s team crushed Zimbabwe by an innings at the Harare Sports Club in the previous meeting, making it three victories on the spin in the format. Another success at the same venue will see Pakistan achieve their best Test-win streak since managing five consecutive triumphs between December 2011 and February 2012.
When and what time will Zimbabwe vs Pakistan 2nd Test match start?
Zimbabwe vs Pakistan 2nd Test match will start at 1:30 pm IST on Friday (7th May)
Which channel will broadcast Zimbabwe vs Pakistan 2nd Test match in India?
Zimbabwe vs Pakistan 2nd Test match will not be broadcast in India.